Zvaunofanira kuita kana iwe ukawana dzihwa uchiri nepamuviri - Dzidzo Yehutano | Chikunguru 2021
Checkout Nhau Wellness Hutano Dzidzo, Hutano Kambani, Iyo Checkout Nharaunda, Kambani Hutano Dzidzo, Zvipfuwo Hutano Dzidzo, Nhau Info Info, Hutano Dzidzo Kambani, Nhau Nhau, Wellness Dzidzo Yehutano Nharaunda Dhinda Kambani, Hutano Dzidzo
Kuru >> Dzidzo Yehutano >> Zvaunofanira kuita kana iwe ukawana dzihwa uchiri nepamuviri
Zvaunofanira kuita kana iwe ukawana dzihwa uchiri nepamuviri
Hutano Dzidzo Maternal Matters
Paunenge uchitarisira, mwana ane hutano ndicho chinhu chaunonyanya kukoshesa-uye zvinoreva kuti utarisire hutano hwako, kunyanya panguva yekutonhora nefuru. Kubata kwepamuviri kunodzvinyirira immune system yako, izvo zvinogona kureva kuti iwe unobata nyore nyore zvirwere zvakajairika. Kunyangwe hosha yacho yakajairika, inogona kuve nenjodzi mukutakura mwana. Neraki, pane nzira dzekuzvidzivirira. Uye, kana iwe uchifunga kuti waburitswa pachena, wako mupi wezvehutano anogona kukutungamira kuburikidza nazvo. Heano maitiro.
ndinobvisa sei hangover
Maitiro ekudzivirira furuwenza panguva yekuzvitakura
Yekutanga, uye yakanakisa, nzira yekudzivirira kubata dzihwa uchiri nepamuviri iri nyore: Tora mushonga wefuruwenza. Izvo zvakakwana yakachengeteka kune vanaamai vanotarisira - ingova nechokwadi chekukumbira mwaka wekurwara nefuru, kwete iyo yemumhino yekudzivirira mushonga. Muchokwadi, iyo Centers for Disease Control and Prevention (CDC) inokurudzira kuti vakadzi vese vane nhumbu vadzivirirwe (uye vagovane runyorwa rwezvidzidzo izvo zvinoratidza kuchengetedzeka uye kushanda kana iwe uchinetseka).
Bhonasi yakawedzerwa? Mwana wako anozozvarwa aine dziviriro mukati memwedzi iyoyo inotambura. Maternal flu antibodies ayo anogadzirwa mushure mekuwana chirwere chefuru ichiyambuka placenta kunopa dziviriro kuvacheche, anotsanangura Jessica Madden, MD, chiremba-anozivikanwa wevana chiremba uye director director Aeroflow Chipfuva cheputi . Nekudaro, majekiseni ekudzivirira furuwenza ndiyo nzira yakanakisa yekudzivirira mwana achangoberekwa kubva mukuwana furuwenza.
Wobva waita chokwadi chekudzidzira iyo mitatu yakapusa mitemo yehutsanana iyo yakave tsika yekutenda kuna COVID-19:
Dzidzira zvakakodzera kugeza maoko
Dzivisa kubata kumeso kwako
Deredza kusangana kwepedyo nevanhu vanorwara
Rangarira, zvinotora mazuva mashoma kuti vanhu vane hutachiona vatange kuratidza zviratidzo, saka chenjera. Kana iwe uine pamuviri uye mumwe munhu mumba mako ane furuwenza, tora mamwe matanho ekuzvidzivirira. Mazuva ekutanga akati wandei mushure mekutapukirwa ndiwo akanyanya kutapukira (kuaparadzira kune vamwe), sekureva kweCDC. Chengetedza chinhambwe kubva kumunhu anorwara, pfeka chifukidzo kana iwe uchifanira kuve mune imwechete kamuri, pukuta pasi nzvimbo, uye dzivisa kushandisa zvakagovaniswa zvinhu. Paunenge usina chokwadi, geza maoko ako.
Chii chinoitika kana ndikabata dzihwa ndichiri nepamuviri?
Kana iwe uchifunga kuti iwe unogona kunge wakabata chirwere ichi uchiri nepamuviri, danaidza mupi wehutano hwako nekukurumidza sezvazvinogona. Kuonekwa kwekutanga uye kurapwa kwechirwere mumadzimai ane nhumbu zvine chekuita nemhedzisiro, sekureva kweCDC.
Muviri wako uri kutoshanda nesimba kuti ukure nekurera munhu wenyama. Hutachiona hwakafanana nefuruwenza hunowedzera kushushikana kuhurongwa hwako -kukuisa panjodzi yakanyanya yezvinetso zvakakomba zvechirwere zvakadai sefivhiri pazvirwere zvishoma uye zvimwe zvechipiri, anotsanangura Snehal Doshi, MD, CEO we Millennium Neonatology .
Zvinoenderana ne Sangano reAmerican Pregnancy , zviratidzo zvechirwere panguva yekuzvitakura zvinosanganisira:
Kufema kwekufema / kukosora
Manyoka kana kurutsa
Kamwe kamwe chando kana fivha
RELATED: COVID-19 vs. furuu ichitonhora dzihwa
Kana ukasangana nechimwe cheizvi flu zviratidzo , tora zvakakomba. Udza chiremba wako wekutanga uye chiremba wako. Vakadzi vane nhumbu vari panjodzi yekuva nematambudziko akakura kubva kuhutachiona hwefuruwenza kusanganisira pneumonia, kuendeswa kuchipatara kana kuchipatara, pamwe nerufu, anodaro Dr. Madden.
inguva yakareba sei inopararira nefuruu
Kune njodzi dzakananga kumwana wako ari kukura zvakare. Dr. Madden vanoyambira nezvekushushikana kwepamuviri izvo zvinosanganisira kupererwa nemimba uye prematurity… zvakare kunetseka kuti fivhiri dzine chekuita nefuru dzinogona kukonzera vacheche kuti vagadzire hurema hwehubhu, senge spina bifida.
Kana iwe uine zvakanyanya Zviratidzo zvechirwere zvakadai sekushaya mvura mumuviri, kupisa muviri zvakanyanya, kana kunetseka kufema, unofanirwa kuenda kuchipatara kana kutsvaga rubatsiro rwechimbichimbi nekukasira. Izvi zvinonyanya kuitika mumamiriro ezvinhu apo amai vane mamiriro akange aripo-ayo anoita kuti chirwere chehururu chinyanye kuitika, senge chirwere cheshuga (kusanganisira gestational chirwere cheshuga) kana asthma. Sezvo nenyaya zhinji dzinomuka mukuzvitakura, zvirinani kuve wakachengeteka pane urombo!
Chii chandingatora kune dzihwa ndichiri nepamuviri?
Nguva dzose bvunza mupi wako wezvehutano usati watanga chero kurapwa-kunyangwe pamusoro-pe-counter mishonga. Chiremba wako anogona kukubatsira kuti uone kuti ndedzipi nzira dzakachengeteka iwe nemwana wako asati aberekwa.
Kana iwe ukaona uine furuu mukati maawa makumi mana nemasere ezviratidzo zvako zvekutanga, kurapwa kwakanyanya mushonga weantiviral unogona kudzikamisa hurefu uye hurefu hwechirwere chako. Tamiflu (oseltamivir) kana Relenza (zanamivir) inoonekwa seyakachengeteka kune vakadzi vane nhumbu, sekureva kwe US Chikafu uye Dhivhosi Kutonga . Oral oseltamivir inokurudzirwa nekuti iine data rakawanda kuratidza kuti rinobatsira, zvinoenderana neCDC.
Vanachiremba vazhinji vanofunga Tylenol (acetaminophen) yakachengeteka kutora panguva yekuzvitakura kuti uderedze kupisa muviri kana kubvisa maronda emuviri. Pair iyo ine yakawanda yekuzorora, yakawanda mvura, uye zvakasikwa kurapwa.
Flu mishonga yekuzvitakura
Kana iwe uine furuwenza, zvese zvaunoda kuti uite kuputika Nyquil uye kusimudzira kurara husiku hurefu. Munguva yekuzvitakura, yakawanda yekubatanidza mishonga senge iyo haibvumirwe. Shinga - pane mimwe mishonga yekumba inopa kurerukirwa chaiko:
Tora mvura inopisa, kana kufema mweya unodziya, wakanyorovera kubva pachiso chechiso kuti ubatsire kukosora.
Gargle nemvura inodziya yemunyu kana uine huro kana chikosoro.
Inwa tii inopisa neuchi nemonimu kunyaradza mhino yakazara uye huro.
Shandisa saline sukurudza kusunungura kuzara kwemazino uye mamasi.
Isa zvinodziya uye zvinotonhorera zvinomanikidza tsandanyama aches uye sinus kurwadziwa.
Hydrate ne inodziya broth uye idya bland chikafu (senge toast) kana uine matambudziko emudumbu.
Zorora zvakanyanya sezvinobvira.
Kuwana furuwenza panguva yekuzvitakura kune njodzi, asi kutaurirana kwakakodzera nevako vanopa hutano kunogona kukubatsira kuti unzwe zvirinani munzira yakachengeteka. Uye kana usati, tora mushonga wako we flu. Ipapo iwe unogona kuve nechokwadi chekuti nhumbu yako ine hutano uye isina kunetseka-kusagadzikana sezvinobvira (zvirinani kana zvasvika kune izvi zvakanyanya kunetseka!).
Ungawana sei yemahara Chantix (kunyangwe isina hutano inishuwarenzi)
Strattera vs.Adderall: Misiyano, kufanana, uye izvo zviri nani kwauri
anoita benadryl anoonekwa mumuedzo wekushandisa zvinodhaka
ndeipi iri nhanho yakajairika yeglucose muropa
kudzikisira kudzvanywa kweropa nekukurumidza zvakasikwa
zvinorevei kana potasium yako yakaderera
famba mukiriniki padhuze neni hapana inishuwarenzi
tylenol yakachengeteka kutora paunenge uine pamuviri
gargling nehydrogen peroxide yehuro